Ividiyo roulette yengxoxo.
10 mayelana nengxoxo yevidiyo ..
Ukuxhumana kungenye yezidingo eziphambili zomuntu wanamuhla. Kepha usuku lokusebenza luhlelwe ngendlela yokuthi iningi lethu lingakhuluma kanjena, sikhulume ngalokhu kusihlwa kuphela, emva komsebenzi. Kunobunzima ekukhetheni i-interlocutor. Ngemuva kwakho konke, udinga ukuphuma endlini kwenye indawo. Futhi ngiphinde ngisebenze noma ngifunde. Futhi manje inkinga yezokuxhumana ibhekene nomuntu wesimanje: Ngifuna, ngempela ngifuna ukuthola umsizi ongamane nje "aphikisane" ngempilo, akhuze umuntu, adumise umuntu, axoxe ngamafilimu amasha noma ifilimu ephezulu yakamuva. Kepha ngasikhathi sinye asikho isikhathi sokushiya indlu bese uzulazula kwenye indawo ngenhloso yokuxoxa nje. Futhi manje kubonakala sengathi ayikho indlela yokuphuma. Kepha ungapheli amandla. Ngenxa yezindlela zesimanje ne-Intanethi esezingeni eliphezulu, wonke umuntu namuhla angathola i-interlocutor yabo efanelekile ngqo kwi-inthanethi. Inethiwekhi inezinsizakusebenza eziningi kakhulu zokuxhumana kangangokuba umuntu wesimanje akadingi ngisho ukucabanga ukuthi angaphuma ekhaya. Ngifuna ukukhuluma ngengxoxo yevidiyo. Noma, phendula imibuzo eyi-10 ethandwa kakhulu ngokuxoxa ngevidiyo. Ngakho-ke, ake sihambe:
1. Yini i-VIDEOCHAT?
Ingxoxo yevidiyo namuhla ngokuyinhloko ingumthombo wokuxhumana phakathi kwabantu abahlukene abavela emazweni ahlukile. Kukhona, izisetshenziswa ezigxile kulimi oluthile noma ezweni elithile. Kepha ingxenye enkulu, lo mthombo ungowezizwe eziningi. Lapha, abantu bayaxhumana besebenzisa ikhamera yevidiyo. Abangeneleli bayabona futhi bayazwana, ngakho-ke inqubo yokukhulumisana ifana kakhulu nokuhlangana ngokweqiniso. Umehluko kuphela ukuthi akudingeki uphathe noma ngubani ngetiye 8)
2. Uyini umehluko phakathi kwe-VIDEO ISAHLUKO NO-ROULETTE kusuka ku-VATO CHAT elula?
Kunezinhlobo eziningi nezinhlobo zezingxoxo zevidiyo. Ungamane ukhethe i-interlocutor bese uqala ingxoxo. Futhi ungasebenzisa izinsizakalo zevidiyo yengxoxo yevidiyo futhi wenze ukuxhumana kube ngokwengeziwe ngokwengeziwe ngokwakho. Futhi nge-interlocutor, futhi. Yini ukweqisa? Iqiniso lokuthi akekho okhetha umhambisi. Umlamuli kule ngxoxo unikezwa ngengozi. Awukwazi kusengaphambili noma yini ngalowo muntu ozoxhumana naye ngesikhathi esilandelayo (noma imizuzu namahora). Konke kuhleliwe lapha: ukukhethwa kwe-interlocutor, isikhathi sokuxhumana, ulimi lokuxhumana, izihloko zokuxhumana, njll., Njll. Le roulette yengxoxo yevidiyo ekhangayo iningi labantu abaya lapho nje ukuxoxa.
I-3. Ubani ongaba yilungu leRoulette Video Chat?
Eqinisweni, ngobuningi akukho mikhawulo. Vele, umuntu obambe iqhaza akakwazi ukuba ngumuntu ongaphansi kweminyaka eyi-18. Ngakho-ke, uma insizwa noma intombazane ingaphezu kweminyaka engu-18, kuyothiwa WELCOME.I-ChattRoulette yanamuhla inikeza izindlela eziningi zokuxhumana. Lokhu kungukuxhumana egumbini elivamile, nokukhulumisana ngasese, okubizwa ngokuthi ukuxhumana kwangasese ne-interlocutor. Kunoma ikuphi, obambe iqhaza angaba ngumuntu ongaphezu kweminyaka engu-18 ubudala. Akunakuvinjwa ngokuphelele ebubini, kwezombusazwe nakwezenkolo, neminye imikhawulo ngaphandle kobudala. Ngakho-ke, abantu abanezintshisakalo ezahlukahlukene kanye namazinga entuthuko ahlangana lapha. Futhi kuyathakazelisa kakhulu. Ikakhulu uma wazi ngokuqinisekile ukuthi maningi amathuba okuthi ubone lomuntu, ikakhulukazi empilweni yangempela.
I-4. Ikhokhelwe noma mahhala?
Iningi lemisebenzi ekuxoxweni ngevidiyo Roulette imahhala ngokuphelele. Kepha kukhona okunikezwayo okukhokhelwayo. Lezi, njengomthetho, izinketho ezingezekile ongazikhetha, noma ongakhetha ukungazenzi. Ngaphezu kwalokho, engxenyeni enkulu yokuxhumana kwamahhala kwanele. Ngakho-ke, ake sibheke ukuthi iyiphi i-roulette ezonikezwa mahhala engxoxweni yevidiyo, nokuthi yini ekhokhwayo.
Nazi izici zamahhala:
amandla okwenqaba ukuxhumana nomuntu othize
kungenzeka kokukhetha ulimi lokuxhumana kanye ne-inflocutor kusuka kwelinye izwe noma idolobha elithile
Futhi nazi izici ezikhokhelwayo:
Faka umuntu okungahleliwe ohlwini lwabalingani abaxhumana nabo njalo
Ukuguqulwa okungu-97 007 kube yindawo yangasese yezokuxhumana
ithola amabhonasi akhethekile avela kumthombo ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokuxhumana
Kuyiqiniso, kunamaphuzu angeziwe wokuthi kuvidiyo ngayinye yengxoxo yevidiyo ingahluka kancane. Kepha ngihlose amaphuzu aphambili.
I-5. Kuthiwani uma i-interlocutor ingathandi?
Eqinisweni, namuhla konke kwenziwa ukuze zonke izivakashi ze-video chat chat zikhululeke futhi zizethembe. Kodwa noma kunjalo, hhayi bonke, kude nabo bonke abalingani bokuxhumana, esingathanda. Konke kufana ncamashí nasempilweni yangempela. Sithanda umuntu futhi siyaqhubeka ukuxhumana nalo muntu. Futhi umuntu akasifaneli nhlobo, futhi angifuni ukuxhumana nalo muntu. Kepha uma empilweni yangempela kunzima kithi ukwenqaba ukuxhumana nalabo esingabathandi, lapho-ke kulula online ukufeza esikufunayo. Futhi uma kungazelelwe ungamthandi umuntu okhuluma naye, kuyenzeka, impela, kulula kakhulu ukuyicisha. Lokhu kungenziwa ngenkinobho eyodwa ebizwa ngokuthi "ngokulandelayo." EsiNgisini, le nkinobho ibizwa ngokuthi: "ngokulandelayo". Kwanele ukucindezela le nkinobho, lapho nje umuntu ozongenela ukhetho oluzungezile we-interlocutor efanelekile enikezwa wena ukuxhumana.
Vele, lokhu kulula futhi kulula. Kepha futhi udinga ukulungiswa ngeqiniso lokuthi wena, njengomlamuli, ungavalwa. Futhi ungashintshwa futhi ushintshwe ngomunye umuntu.Futhi lapha awukwazi ukwenza lutho, empeleni. Ngakho-ke, inkinobho eyodwa "elandelayo" ne-voila, usuvele unotho ohlukile wokuxhumana phambi kwesikrini sekhompyutha.
I-6. Kuyini "ukuxhumana kwangasese" nokuthi ungakuthola kanjani?
Njalo i-Chatt Roulette inamagumbi amaningi okuxoxa. Kepha kukhona ezimbili ezibalulekile:
Ngaphansi kwegumbi elivamile kubhekisele kuyo yonke indawo yesisetshenziswa. Futhi lapha imithetho iyafana kuwo wonke umuntu. Noma yikuphi ukuxhumana okukhona egumbini elivamile kuyinto engahleliwe. Futhi inqubo yokuxhumana iqhubeka ngqo kuze kube yilapho omunye wabahlanganyeli kule nqubo echofoza inkinobho "elandelayo". Lapho nje le nkinobho icindezelwa (kungakhathalekile ukuthi ubani), ukuxhumana kuzonqanyulwa.
Kepha kukhona umehluko omnandi emthethweni ojwayelekile. Kusendaweni yokuthi wonke umuntu, uma efisa, angakwazi ukufinyelela egumbini langasese. Igumbi langasese liyindawo ekhethekile nevikelwe kusisetshenziswa seRoulette, lapho ukuxhumana kuthatha isikhathi eside njengoba ufuna futhi ngasikhathi sinye noma ngokucindezela inkinobho eyodwa, lokhu kuxhumana ngeke kumiswe. Ukukhulumisana ngasese kusho okokuqala ukuxhumana ngasese lapho kungekho khona umuntu ongaziwa ongangena khona. Lokhu kuxhumana, lapho ukwazi ukukhokha okungaphezu kwalokho egumbini elivamile. Futhi kungukuxhumana kwangasese okukhokhelwa kuma-video amaningi engxoxo yevidiyo. Ukuze umeme umhambisi othile endaweni yokuxhumana yangasese, kwanele ukukhokhela lokhu kukhulumisana kanye ne-voila, igumbi lizovuleka futhi ingxoxo iqhubeke ngaphandle kwemikhawulo. Yilolu hlobo lokuxhumana okuyimfihlo oluheha iningi lezivakashi kusiba sezingxoxo zevidiyo.
Kuyiqiniso, eminye imikhawulo ikhona lapha, endaweni yokuxhumana yangasese. Kepha ingxenye enkulu, le mikhawulo ingafundwa ngaphambi kokuthi le ndawo yobumfihlo ikhokhwe.
7. Yini okudingeka uyenze ukuxhumana ku-Roulette VIDEO CHAT?
Ukuxhumana, noma yikuphi (ngisho kungaxhunyiwe ku-inthanethi) kudinga izindlela ezithile nezinsizakusebenza. Uma sikhuluma ngokuxhumana kuvidiyo yengxoxo yevidiyo, sidinga izidingo ezithile zezimali. Eqinisweni, cishe wonke umuntu wesimanje angahamba kalula kwi-Videochat Roulette iwebhusayithi futhi aqale ukuxhumana nanoma yimuphi umuntu okungahleliwe.
Ngakho-ke, nazi, izidingo ezincane kunazo zonke zokudingayo ku-ChatRoulette:
ikhompyutha enamandla anele okubamba umhlangano ngefomethi yevidiyo
I-700007 imakhrofoni yekhwalithi enhle
Ngokuyinhloko, lokhu konke okudingekayo ukuxhumana ngalesi sisetshenziswa. Ngokwemvelo, izidingo zemakrofoni kanye ne-webcam kufanele zande ngokweqile. Imakrofoni kumele ibe sezingeni eliphezulu kakhulu.Imakrofoni enhle luhlobo lwezindlela ezibaluleke kakhulu zokuxhumana ngempumelelo.
Ikhamera yewebhu nayo iphuzu elibaluleke kakhulu. Ikhamera yewebhu enhle kufanele isize ukudluliswa kwezithombe nevidiyo ngaphandle kokwehla kancane. Akukho okufanele kuphazamise ukuxhumana kwabantu ezinhlangothini zombili zekhamera.
Futhi ngokwemvelo, ikhompyutha ngokwayo kumele ibe namandla ngokwanele ukuze kungabambeki lutho. Ukuze kungabikho lutho oluphazamisa ukuxhumana.
8. Ngingakwazi ukubeka imigomo yokusesha ye-interlocutor?
Okokuqala ingxoxo yevidiyo, umdlalo wokuzijabulisa omnandi. Ngakho-ke, akuyona imfihlo ukuthi wonke isivakashi uza lapha ngenhloso yokuzijabulisa nokuxoxa nabanye abantu abathandekayo. Futhi ukukhetha okungahleliwe kozakwethu wokuxhumana nakho kumnandi impela. Kodwa kwesinye isikhathi ngifuna ukukhuluma, hlangana nomlingani ongahleliwe, kepha ngamapharamitha wokuxhumana athile. Ngakho-ke, abanikazi nabathuthukisi bazama futhi benza konke okusemandleni ukuze isivakashi ngasinye sevidiyo yokuxoxa ngevidiyo sikwazi ukuxhumana ngaphandle kwezinkinga hhayi nje noma ngubani, kodwa sazi ukuthi ngubani ozonikezwa njengomhambisi. Okungenani okulinganiselwa. Ezinsizeni eziningi ze-video chat roulette namuhla ungakhetha abalingani ngokuya ngamapharamitha alandelayo:
Yilezi zinhlaka ezihlongozwayo ukuzikhetha, njengoba zisho, umhambisi yedwa. Futhi isivakashi ngasinye sevidiyo yokuxoxa ngevidiyo singasebenzisa ilungelo lokukhetha noma ukumane singabanaki bese siqala ukuxhumana okukuyo ngokomzwelo nokuvumayo kwe-inthanethi.
9. Kungani i-roulette ingavinjelwa engxoxweni yevidiyo?
Naphezu kweqiniso lokuthi i-video chat roulette yenzelwe ukuxhumana phakathi kwabantu, kukhona njalo ingozi yokuvinjwa. Ake sibheke ukuthi yiluphi uhlobo lomvakashi ngamunye angavinjelwe lona. Ngokuyisisekelo, vimbela ukuphoqelela abasebenzisi abephula le mikhawulo elandelayo:
ukuthuka nganoma yiluphi uhlobo lwenhlonipho nesithunzi somuntu. Ngokuvamile, noma yikuphi ukuthuka kungaholela ekuvinjelweni. Ngakho-ke, isisekelo sokuxhumana kunoma iyiphi insizakalo ukuhlonipha nokuhloniphana.
kwanoma yini. Ukukhangisa akuvunyelwe. Futhi lokho kunjalo. Ngemuva kwakho konke, isayithi lenziwa ukuze abantu bakhulume futhi baphisane ngemibono, futhi bangalaleli izikhangiso zomkhiqizo noma zensizakalo.
inhlamba ngaphandle kwemvume ehambisanayo futhi endaweni yangasese kuphela.
nawo wenqatshelwe. Futhi, ngicabanga ukuthi akekho umuntu ongayithanda uma beyisebenzisa kuphela njengeplanethi yokugaxekile.Ukuvinjwa kulula futhi kuqondile. Uma umhambisi wakho ephula umthetho futhi ngaleyo ndlela ekuvimbela ukuthi ujabulele ukuxhumana, lapho-ke ungahlala ukhononda ngakho kumphathi wephrojekthi. Izenzo zizothathwa kakhulu, ngokushesha okukhulu. Kuliqiniso, uma kunesikhalazo esisodwa, khona-ke ukuvinjelwa khona manjalo ngeke kulandele. Kepha kuzodingeka isexwayiso. Uma kunezikhalazo eziningana ezivela kubantu abahlukile, ukuvinjelwa kungashesha futhi ngaphandle kwezixwayiso.
I-10. Obani abangazuza kwi-VIDEO ISAHLUKO SEZIMALI?
Emhlabeni wanamuhla, iningi labantu lilinganiselwe kakhulu ekuxhumaneni. Ngakho-ke, izinsizakusebenza ezifana ne-video chat roulette ngeke kube nje indlela yokuzijabulisa, kodwa futhi nenkundla yokuziqeqesha. Okabani? Kwabaningi, abantu abaningi. Isibonelo, lo mthombo ungaba usizo kubantu abalandelayo:
kulabo abanamahloni okuxhumana nabantu empilweni yangempela.
kulabo abathola kunzima ukwenqaba isicelo. Lapha ungavele ufunde ukuthi ungaqala kanjani ukunaka omunye umuntu. Kepha lokhu futhi kungaba yingozi. Impela, empilweni yangempela, awukwazi nje ukucisha umuntu futhi uyeke ukukhuluma ngomzuzwana ohlukanisayo.
yalabo abafuna umngane womshado noma abafunda nje ukuxhumana nabobulili obuhlukile.
ilula kulabo abathanda futhi baxhumana nabantu.
Ngakho-ke, noma yini umuntu angayisho, i-ChattRoulette izohlala ijabulela inhlonipho efaneleke kakhulu phakathi kwabantu abaningi beplanethi yethu emangalisayo. Futhi lokho kuhle. Lokhu kusho ukuthi abantu basaqhubeka nokuthanda ukuxhumana nohlobo lwabo.